छोरीले आफ्नो इच्छा विपरित प्रेम विवाह गरेको भन्दै बावुले आफ्नै परिवारका ७ जनालाई ज्युँदै ज’लाए – List Khabar
Home / समाचार / छोरीले आफ्नो इच्छा विपरित प्रेम विवाह गरेको भन्दै बावुले आफ्नै परिवारका ७ जनालाई ज्युँदै ज’लाए
admin October 20, 2021 समाचार Leaveacomment 168 Views
एजेन्सी । छोरीले आफूखुसी विवाह गरेको भन्दै पाकिस्तानमा एक पुरुषले आफ्नै परिवारका सात जनालाई ज्युँ’दै ज’ला’एका छन् । छोरीले आफ्नो इच्छा विपरित प्रेम विवाह गरेको र आफ्नो आत्मसम्मान गुमेको भन्दै पाकिस्तानका मन्जुर हुसेनले परिवारका सात सदस्यलाई ज्युदै ज’ला’एका हुन् ।
इन्डिसेन्डेन्ट रिपोर्टका अनुसार उक्त घटना पाकिस्तानको पन्जाव प्रान्तस्थित मुजाफरगढ जिल्लाको हो । हुसेनले आफ्ना दुई छोरी र पाँचवटा नातिनातिनीलाई ज्युँ’दै ज’ला’एका हुन् ।
हुसेनले छोरी फौजिया बिबिले आफ्नो इच्छा विपरित प्रेम विवाह गरेको भन्दै उनी श्रीमान र नाबालक छोरासहित माइतीमा बसेको बेला आ’गो लगाएर ह’त्या ग’रे’का हुन् ।
सो घटनाबाट फौजिया बिबिका पति मेहबुब अहमद मात्र बाँच्न सफल भएको र घटनापछि उनले प्रहरीलाई खबर गरेको बताइएको छ । अहमदको बयानको आधारमा प्रहरीले घटनामा सं’ल’ग्न भएको भन्दै ससुरा मन्जुर हुसेन र सालो सविर हुसेनलाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरी अधिकृत अब्दुल मजिदले रोयटर्सलाई बताएअनुसार मृतक फौजिया र अहमदले सन् २०२० मा प्रेम विवाह गरेका थिए । उनीहरुको प्रेम विवाहका कारण दुई परिवारबीच टकराव पैदा सुरु भएको थियो । फौजियाका पिता मन्जुर हुसेन छोरीको वैवाहिक सम्बन्धविरुद्ध थिए ।
सोहि कारण उनले परिवारका सातै सदस्यलाई ज्युँ’दै ज’ला’एको प्रहरीको निष्कर्श छ। पाकिस्तानमा हरेक वर्ष करिब १ हजारभन्दा बढी यस्तै प्रकृतिका घटना हुने गरेको मानवअधिकारको एक रिपोर्टले देखाएको छ।
Previous सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर नेपालमै राष्ट्रपति ले भन्दा बढी तलब खान्छिन् यी माहिला: को हुन् उनी , कति तलब?
Next भोलि ४ कार्तिक २०७८ बिहिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !